हिमाल किन मौन बाँचिरहेको छ ?
हिजोआज एउटा नाराको विकास भएको छ ‘हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराइ’ समावेशी नेपालको नवप्रध्वनी हो यो । तर यो नाराभित्रके साँच्चिकै कोही काखा र कोही पाखा छैन होला त पक्कै ! सबैले भन्ने गर्छन् तराईमा सुन फल्छ । तर, हिमालको नाउँ हम्मेसी कसैले पनि लिंदैनन् । हिमालको नाम वा हिमालय क्षेत्रको चर्चा त्यतिबेला मात्रै चुलिन्छ जब वसन्त ऋतु सुरु हुन्छ । तराई र पहाडमा जब गर्मी सुरु हुन्छ अनि सबैलाई हिमाल प्यारो लाग्न थाल्छ । आजको यो लेखमा म हिमालय सौन्दर्यको कुरा वा पर्वतीय श्रृङ्गारको कुरा गर्न गइरहेको छैन । यो लेखमा हिमालमुनिको अँध्यारोको बारेमा केही कुरा भन्न गइरहेको छु ।
हिमालय पर्वतलाई आफ्नो काँधमा बोकेका जिल्लाहरु जुम्ला मुगु डोल्पा मुस्ताङ मनाङ गोरखा रसुवा सिन्धुपाल्चोक दोलखा सोलुखुम्बु सन्खुवासभा र ताप्लेजुङ् हुन् । सातै प्रदेशअन्तर्गत पर्ने यी जिल्लाहरुको पहाडी भेगसम्म विकासको पूर्वाधार खडा भए पनि पहाडी भेगबाट जब उत्तरतिरको हिमालय रेन्ज नजिकका स्थानीय क्षेत्र, जहाँ हिमालयको उज्यालो आउँछ त्यहाँका स्थानीय जनताको समग्र विकासको लागि सरकारको कहिले पनि ध्यानाकर्षण हुन सकेको छैन ।
नेपाल सरकार चाहे पञ्चायतकालीन हुन्, चाहे लोकतान्त्रिक र गणतन्त्रकालीन हुन् वा प्रजातान्त्रकालीन हुन् ती सबैको ध्यान केवल तराई र तराइवासीले दिएको दुःख सम्बोधन गर्दैमा पचासौं वर्ष बितिरहेको छ । एउटा सिंगो शरीरको मुटुको घाउ हो तराई तर शीर (हिमाल) मा फुलेको रोगी कपाल र भित्र दुःखेको पिनासतर्फ हाम्रो ध्यान गएको छैन । सत्ताको लुछाचुँडीमा केवल तराई मात्रैको आवाजलाई सुनियो तर हिमाल पेन किलर खाएर मात्रै समाधि बसिरह्यो ।
नेपाल सधैं तराईको राजनीतिक समस्या समाधानमा अलमलिएको छ । हिमालय शृङ्खलाका शेर्पा समुदायको आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक, शैक्षिक, भौतिक र धार्मिक उन्नतिका लागि हामीले कहिले पनि ध्यान दिएको देखिएन । तराईको सांसदले संसद् भवनभित्र मेच कुर्सी भाँचिरहँच्दा हिमालय भेगका सांसदहरु कुन ढोकाबाट बाहिर निस्कने भनेर हातमा धुपीको माला जपिरहेका हुन्छन् ।
खोइ किन होला हिमाल कहिले पनि सम्बोधनमा परेन वा महत्वमा परेन ।
वर्षको चालिस करोड भन्दा बढी राजस्व हिमाल चढ्नेहरुले मात्रै नेपाल सरकारललाइ बुझाउँछन् । त्यसको तीस प्रतिशत आम्दानी स्थानीय तहमा खर्च गरिएको दाबी सरकारले गरे पनि त्यसको अलिकति पनि छनक स्थानीय तहले अनुभूत गर्न पाएका छैनन् । आज पनि त्यहाँ एक पोका चाउचाउको साठी रुपैयाँ छ । चामललगायत अरु खाद्य पदार्थ ढुवानीमा सरकारले दिएको अनुदान पनि प्रभावहीन छ । ढुवानीमा अनुदान दिए पनि महँगाइ उस्तै छ । एकातिर अनुदान दिएको बहाना गर्ने अर्कोतिर महँगाइमा नियन्त्रण र नियमन गर्ने निकायले रमिते भएर बसिदिएपछि त्यसको असर केही पनि पर्दैन । यातायात अभाव र भौगोलिक विकटताका कारण हिमाली भेगका महिलाहरु प्रसूति सेवा लिन चार लाखको हेलिकप्टर चढेर कि काठमाडौं आउनुप-यो कि एक हप्ता लगाएर खच्चडमा बोकिएर सदरमुकाम झर्नुप-यो । खोइ कहाँ छ राज्यको उपस्तिथि त्यहाँ ? हिमालयको धाक लगाउन हिमालको उन्नतिका लागि खै के ग-यौं हामीले ?
केवल तराई मात्रै प्राथमिकतामा परेको छ । हिमालय कहिले प्राथमिकतामा परेन । यार्सागुम्बा हुने भेगका स्थानीयले त भलै अलिकति जीवन धान्लान् तर सबै ठाउँमा यार्सागुम्बा हुँदैन । केवल भोको पेटले हिमाल हेरेर के गर्नु । हिमाल हेर्नु र त्यसको सौन्दर्य शास्त्र आफ्नो ठाउँमा होला तर हिमालमुनि बाँचिरहेका नेपालीहरुको अनुहारको अँध्यारो कसरी उज्यालो होला यो कुरामा नेपाल सरकारले कहिले ध्यान दिएन ।
हिउँ पगालेर पानी पिउनुपर्ने बाध्यता छ होला भन्ने कुरा कतिपयले अनुमान पनि लगाउन सक्तैनन् । सबै नदीहरुको मुलस्रोत हिमाल हो तर नदी छेउमा घर कत्तिको हुन्छ र ? हिउँको सिरक बनाएर ओढ्न त सकिँदैन वा हिमनदी बगेको किनारमा घर पनित हुदैनन् । हिमालमा पिउने पानीको अभाव छ त्यो कुरा सायद हामीले बुझेका छैनौं । हिमालमा प्रशस्त जडिबुटी छ तर उपचार गर्न सदरमुकाम नै झर्नुपर्छ । हिमालमा अलिकति आलु अलिकति जौ अलिकति जुनेलो अलिकति कोदो अलिकति कागुनो अलिकति हिउसिमी फलेर के गर्नु उब्जेको अन्नले दुई महिना पनि खान पुग्दैन ।
तराईका नेपालीको त भारत ससुराली होला ठाउँ समथर छ यता नपुगे उताबाट उता नपुगे यताबाट लैजालान् तर हिमाली भेगमा बस्ने नेपाली तिब्बत वा चीन जानलाई हिउँको पर्वत नाघ्नपर्छ । हिमालय आफै पर्खाल हो । त्यो पर्खाल यति दुर्लङ्य छ कि कसैले पनि नाघेर जान सक्तैनन् । तराईले जस्तो रोटी बेटिको सम्बन्ध राख्दैनन् चीनसँग हिमालका बासिन्दाले ।
भौगोलिक विकटताको आँसु धेरै पिएर बाँचे हिमाली भेगका जनताले । आज पनि कर्णाली मुगु जुम्ला डोल्पा पाँचथर सोलु पाँचथरका जनता बुद्ध जस्तै शान्त बाँचेका छन । तिनका आवाज किन मौन छन् बुझ्न सकिएको छैन । दिनदिनै तराईको चित्कार सुनिरहेका यी कानले हिमालय पर्वतको गीता सुन्न पाएको छैन । बोल्नु चिच्याउनु वा आवाज निकाल्नु मात्रै ठूलो कुरा होइन । आवाजत पहाडमा पहिरो खस्ता पनि आउँछ, आवाजत नदीमा भेल बग्दा पनि आउँछ । आवाज त मेघ गर्जिंदा पनि आउँछ । आवाज त निरीह हरिणलाई बाघले झम्टदा पनि आउँछ । तर मौन बस्नुभित्र कति ठूलो आवाज हुन्छ त्यो कुरा पनि सरकारले बुझ्नुपर्छ । तराईले जस्तो विकास खोसेर लिएन हिमालले । तराईमा जस्तो सधैं आँखा पुगेन सरकारको तर हिमालको दुःख कहिले पनि सम्बोधन भएन । संविधान संशोधनको प्रस्ताव कहिले राखेन हिमालले ।
हिमाललाई त हामीले बेच्यौं मात्रै सालिन्दा । त्यसको आनन्द ताप्न दियौ अरुलाई, त्यसको स्पर्शले अरुलाई पुलकित बनायौ तर उनै रोएको खोइ त हामीले देखेको वा तिनको आँसु पुछेको ।
हिमाल रोएको आँसु तराई पुगेको छ । त्यही आँसुमा तराइ पौडी खेल्छ । त्यही आँसुलाई तराई बाँध बाधेर सिँचाइ गर्छ र सुन फलाउँछ । तर, कहिले सोधेन तराईले हिमाललाई के छ तिम्रो दुःख भनेर । तराई सधैं आफ्नो बिहेको रत्यौलीमा रङबङ्गी रह्यो । उसले कहिले सोधेन हिमालको चिसोको पीडा । तराई सधैं आफ्नै मधुमासमा राज्यलाई मेरो मधुमास हेर भनेर घचघच्याइ रह्यो । उसले शिरतिर फर्किएर कहिले हेरेन त्यो लेकको कालो घनघटा ।
हिमाली भेगको सम्पन्नताको बारेमा राज्यले कहिले चासो राखेन ।
वास्तवमा हिमालय पर्वत हेर्नलाई मात्रै हो भन्ने हेतुमा हामी अलमलिएकै हो । त्यहाँका स्थानीय जनताको समृद्धिको लागि राज्यले बनाउनुपर्ने नीति अब निर्माण गर्नुपर्छ ।
हिमाल र हिमाली जनता, हिमाली संस्कृतिको उत्थानका लागि अब
१) आर्थिक सम्पन्नताको लागि पहिलो प्राथमिकता त्यहाँको स्थानीय स्रोत साधनको परिचालन ।
२) हिमाल आरोहण गर्दा उठेबापतको रोयल्टी शतप्रतिशत त्यहीँको स्थानीय विकासका लागि खर्च गर्ने ।
३) हिमाली भेगका स्थानीय जनतालाई उच्च माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूर्णरूपमा निःशुल्क बनाउने ।
४) यार्सागुम्बामा स्थानीय हिमाली भेगका जनताको मात्रै अधिकार प्रत्याभूत गर्ने
५) हिमाली भेगको स्थानीय सरकार आफ्नै समुन्नतिका लागि त्यति क्रियाशील देखिंदैन । त्यसमा केन्द्रीय सरकारले प्रत्यक्ष निगरानी राखी स्वरोजगार सिर्जनामा स्थानीयलाई सक्रिय बनाउने ।
६) प्रत्येक हिमाली जिल्लामा जडिबुटी प्रशोधन तथा औषधि उत्पादन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने ।
७) जलविद्युत् उत्पादनको प्रस्तावित क्षेत्र निर्धारण गरी हिमाली क्षेत्र नजिक उत्पादन जलविद्युत् गृहलाई सरकारले अनुदान दिई स्थानीयलाई नै अधिकार सम्पन्न बनाउने
८) हिमाल आरोहणका लागि आउने विदेशीका लागि चाहिने टुर गाइड काठमाडौंबाट लिएर जान नपाउने त्यहीँ टुर गाइड उत्पादन गर्न तालिम केन्द्र वा कलेज निर्माण गर्ने ।
९) हिमाली प्रान्तमा खोलिने होटेल व्यवसायलाई नेपाल सरकारले अनुदान प्रोत्साहन र करमा छुट दिने
१०) सडकको पहुँच प्रायः हिमाली जिल्लाहरुमा आजसम्म छैनन् सडक निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता राख्ने ।
११) पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि हिमाल र हिमाली जनता नै आधार स्रोत भएको नाताले तिनको समृद्धिका लागि नेपाल सरकारले प्रचुरमात्रामा बजेट व्यावस्थापन गर्ने ।
१२) नेपाल घुम्न आउने विदेशीलाई पर्वतीय यात्रा अनुमति पत्र दिँदा नै स्थानीय विकास कर भनेर छुट्टै रोयल्टी उठाउने र त्यो उठेको निर्धारित रकम स्थानीय विकासमा खर्च गर्ने
१३) हिमाली भेगको विकासका निम्ति राजधानीमा स्थापना गरिएका पाँच तारे होटेललाई विशेष कर लगाउने र त्यो रकम त्यस भेगको आर्थिक समृद्धि योजनामा खर्च गरिने ।
१४) शेर्पा समुदायको जातीय समुत्थानका लागि अनुसन्धान र शेर्पा सस्कृतिको अध्ययन युनिभर्सिटीहरुबाट गराउने
१५) आदिवासीअन्तर्गत पर्ने शेर्पाहरुलाई लोपोन्मुख समुदायमा राखेर त्यसको जनसांख्यिक वृद्धिका लागि पहल गर्ने
१६) हिमालमुनिका आदिवासी शेर्पा र अन्य वर्गलाई विदेश पलायन हुनबाट जोगाउने ।
१७) शेर्पाहरुलाई हरेक वर्ष हिमाल आरोहण गर्न आएका विदेशीले स्पोन्सर गरेर युरोप अमेरिका अस्ट्रेलिया लिएर जाने क्रम धेरै बढेको छ । यो प्रक्रियामा रोक लगाइएन भने हिमाल निकट भविष्यमा खाली हुने अवस्था आउन सक्नेछ ।
हिमालय छैन भने नेपाल पनि छैन । हिमालयको सुरक्षा भनेको पर्वतको मात्रै सुरक्षा होइन । हिमालको फेदमुनि बाँचिरहेको हुर्किरहेको त्यहाँका जनता र तिनको हिमाली संस्कृति पनि हो । शेर्पा समुदायको उत्थान र संरक्षकत्वको लागि आजसम्म नेपाल सरकारले के काम ग¥यो त्यसको अभिलेख स्थानीय तथा पर्यटन मन्त्रालयमा होला तर त्यहाँको अवस्था आज पनि पुरातन नै छ ।
केवल लुक्ला एयरपोर्टमा तारा एयरले दिनको पचास लाइट उडान भरेर विदेशीलाई हिमाल देखाउन ओसार–पसार गरेर मात्रै समस्त हिमाली जनताको आर्थिक उत्थान हुँदैन । त्यही लुक्ला हो जहाँ एक पाकेट नुनको ७० रुपैयाँ छ । एक पाकेट वाइवाइको ६० रुपैयाँ छ, एक किलो चामलको तीन सय छ, एउटा कुखुराको अन्डाको २५ रुपैयाँ छ, एक पत्ता सिटामोलको दुई सय छ । एक छाक खानाको पाँच सय छ । पैसा हुनेले मात्रै बाँच्न पाउने हो र ?
सोलु सल्लेरी हुँदै लुक्लासम्म मोटर बाटो पु-याउने योजना बीचमै अलपत्र परेको छ । लुक्लासम्म मोटर बाटो पु-याउन सकिएको खण्डमा हवाई जहाजबाट बोकेर लगेको खाद्यान्नको महँगाइबाट स्थानीयले राहत पाउने थिए ।
हिमाल भनेको सगरमाथा मात्रै होइन । हिमाल भनेको अन्नपूर्ण र गौरीशंकर मात्रै होइन । सयौं हिमालय पर्वतले सुसज्जित छिन् नेपाल आमा  । हिमाल आफैं मौन छ । चुपचापले बसेको छ । चुपचापले सहेको छ यसले विदेशी बुटको चाप । सौन्दर्य बेचेर कमाएको पैसा राजधानी भित्रिन्छ, त्यहाँ त केवल फोहोरको थुप्रो लाग्छ । पन्ध्र दिन विदेशीको हरक आउँछ त्यहाँ । केही आम्दानी होला स्थानीय जनतालाई पनि । केही भरिया भएर थोरै कमाउलान तर अर्को एघार महिना बेरोजगार भएर बस्नु परेको पीडा खोइ कसले बुझ्यो र आजसम्म ?
एनजीयो र आइएनजीयोका हरिया झिंगाहरु खुब भन्किन्छ त्यहाँ पनि ! तर, एक पाकेट जीवन जल बेच्दा पसलेले तारा एयरले बोकेको हवाई भाडाको चौबर दर कसेर लिन्छ अनि पाखाला लागेर थलिन्छन् शेर्पा दाइहरु । शेर्पा दाइको ओठको उभारमा हिमालय हाँसे पनि खोइ किन हो शेर्पा दाइले कहिले पनि मेच कुर्सी भाँचेनन् प्रतिनिधि सभाहलमा । कहिले गुनासो सुनिन मैले तिनको मुखबाट ।
समावेशी गणतन्त्र नेपालमा खोइ मेरो हिमालयका शेर्पा दाइ र शेर्पिनी दिदीको नाम र प्रतिनिधित्व कहाँनिर छ देखाउनुस् त ? केवल तराईको तातोले मथिङ्गल हल्लाउँछ यहाँ तर हिमालय कहिले बोलेन । न ऊ दङ्स्यावो पिंगको कुरा गर्छ न ऊ मोदी आउँदा चिच्याउँछ । हिमाल बुद्ध बनेर चुपचापले मौन छ तर हामीले कहिले बुझेनौं त्यो मौनताभित्रको आदिम लय ।